Ugu Weyn Ee Alpine Fescue
Qeexida noocyada ugu waaweyn ee fescue
Falscue - warshad dilka ah oo badar ah. Hawsha ugu muhiimsan ee cawska ayaa ah gaar ahaan qurxinta, waana sababta ay u jecel yihiin naqshadeeyayaasha muuqaalka. Tani waa geedka quruxda leh ee aad u qurux badan. Faa'iidada aan la iska-qaadin ee fescue waa in ay u adkaysata cudurada iyo dulin. Fescue genus wuxuu leeyahay in ka badan 150 nooc, laakiin waxaan u aqoonsannay kuwa ugu caansan iyaga oo siinaya astaamahooda.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Alpine Fescue 2019